Xiriirka kubada Cagta Soomaaliya oo Mamnuucay in Magacyada Xiddigaha Ajaanibta ah loogu yeero Cayaartoyda dalka. – Cayaaraha dunida
War ka soo baxay xafiiska Gudoomiyaha Xiriirka Soomaaliyeed ee Kubada cagta Mudane Cabdi qani Saciid carab ayaa Warbaahinta looga mamnuucay in ay Cayaartoyda dalka ugu yeeraan magcayada Cayaartoyda Ajaanibta ah ee ay qaarkood la bexeen si loo dhawro Anshaxa iyo magacyada suuban ee ay Waalidiintu u bixiyeen Caruurtooda.
War Saxafadeedkaan ayaa lagu sheegay in Cayaaryahan kasta oo ka cayaaraya Horyaalka Soomaali Premier League loogu yeeri karo oo kaliya Magaca Rasmiyan uu u leeyahay ee Soomaaliga ah balse aan loo isticmaali jarayn Magacyada ay Neynaas ahaan ula bexeen ee u badan Magacyada Cayaartoyda Ajanabiga ah ee ka Cayaara Caalamka.
Cayaartoyda la Cayaarta Horyaalka Soomaali Premier League ayaa qaarkood loogu yeeraa magacyada Cayaartoyda Ajanabiga ah sida Benteke Ronaldo Saha Pogba Anelka iyo kuwo kaloo aad u fara badan balse Xiriirka kubada cagta Soomaaliya ayaa Mamnuucay in Magacyadaas loogu yeero Cayaartoyda Soomaaliya.
Dhawaan ayey ahayd Markii war saxaafadeed ka soo baxay xafiiska Xoghayaha guud ee Xiriirka kubada cagta Soomaaliya mudane Xasan Fareey lagu Mamnuucay Cayaartoyda Timaha u jarata sida qaabka daran isla Markaana koobiyeeya Cayaartoyda ajaniga ah ee ay shaashadaha ka daawadeen kaas oo ka dhaqan galay garoomada kadib markii ay iska Xiireen Cayaartoydu Timaha iyo qaabkii ay u jaran jireen oo ay badaleen.
Xiriirka ayaa sheegay in Go.aamadaan ay kaga dan leeyihiin Xakamayn dhaqalamada shi sheeye ku xad gudubka diinteena islaamka iyo ilaalinta dhaqanka suuban ee dalkeenu leeyahay iyaga oo hoosta ka xariiqay in aysan ogolaan doonin wax kasta oo u muuqda ku dayasho dad aynaan isku diin iyo dhaqanba ahayn.